कुन होला भारत र चीन पछि सबैभन्दा व्यापारिक कारोबार मुलुक ?
काठमाडौं– व्यापारिक सम्बन्धका हिसाबले नेपालले सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने मुलुक भारत हो भन्ने कुरामा शंका रहेन । छिमेकी मुलुक र चीनियाँ सामाग्रीको उपभोगको अवस्था हेर्दा भारत पछि चीनलाई व्यापारिक कारोबार गर्ने मुलुक भनेर अनुमान लगाउन सहज छ ।
भारत र चीन पछि व्यापारिक कारोबार बढी भएको मुलुक कुन होला ? सरकारी तथ्यांकले तेस्रो धेरै कारोबार हुने मुलुक अर्जेन्टिना रहेको देखाएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अर्जेन्टिनाबाट गएको ११ महिनामा ३५ अर्ब २६ करोड ७५ लाख ४५ हजारको आयात भएको छ । उक्त समयमा निर्यात एकदमै कम लगभग २० लाख मात्र छ ।
आयात गरिएका सामाग्री हेर्दा अचम्म लाग्दो तथ्यांक छ । आयात गरिने सामाग्रीमा नेपालबाट निर्यात गरिने सामाग्रीमा पहिलो नम्बरमा पर्ने सोयाविन आयलको कच्चा पदार्थ रहेको छ । उक्त अवधिमा करिव ३५ अर्बको सोयाविन, सन फ्लावर र पाम आयलको कच्चा पदार्थ आयात गरिएको छ । गएको १० महिनामा नेपालबाट करिव २५ अर्बको पाम आयल निर्यात भएको तथ्यांक छ । योसँगै अर्जेन्टिनाबाट बीउ, बिजन र विद्युतिय सामाग्री आउने गरेको छ ।